ဂြာမနီတှငျ ဓာတျဆီဆိုငျအားလုံးကို လြှပျစဈကား အားသှငျးရနျ စီစဉျထားရနျ ပွဌာနျး - Myanmar Automobile and Equipment Directory
တဈစိတျတဈပိုငျးအနနှေငျ့ မျောတျောယာဉျမြားအတှကျ ဝယျလိုအားကို ဖွညျ့ဆညျးရာတှငျ ကားမြား လြှပျစဈဓာတျအားသှငျးရနျအတှကျ စီစဈျထားရနျ ဓာတျဆီဆိုငျအားလုံးမှာတာဝနျရှိသညျဟု ဂြာမနီအာဏာပိုငျတို့က ပွောကွားခဲ့သညျ။
လြှပျစဈမျောတျောယာဉျဝယျလိုအား သိသိသာသာမွှငျ့တငျရနျ ဆောငျရှကျသှားမညျ ဖွဈရာ
လထေုညဈညမျးမှု ပိုမြားသော အငျဂငျြ အကွီးစားမြား တပျဆငျထားသညျ့ SUV မျောတျောယာဉျ ပိုငျဆိုငျသူမြားကို အခှနျ တိုးမွှငျ့ စညျးကွပျသှားမညျဖွဈပွီး လြှပျစဈကားအသဈ ဝယျယူသူတို့ကို အစိုးရမှ ထောကျပံ့ငှေ ယူရို ၆၀၀၀ ခြီးမွှငျ့သှားမညျ ဖွဈသညျ။
ဂြာမနီတှငျ ပွီးခဲ့သညျ့ နှဈက အိမျစီးကားအသဈ ယာဉျမှတျပုံတငျခွငျးတှငျ လြှပျစဈကားသညျ ၁ .၈ % သာ ရှိသညျ။ ဒီဇယျကား ၃၂ % ရှိပွီး ဓာတျဆီကား ၅၉ . ၂ % ရှိသညျ။
ပွီးခဲ့သညျ့ မလေတှငျ ယာဉျအသဈ စီးရေ ၅၅ ၇၈ ရှိရာတှငျ လြှပျစဈကားမှာ ၃ .၃ % သာ ပါဝငျခဲ့သညျ။
လြှပျစဈကား ဝယျမစီးကွသညျ့ အဓိက အကွောငျးတဈခကျြမှာ ဘကျထရီ အားသှငျးရနျ နရောမြား နညျးပါးနသေဖွငျ့ ခရီးတာဝေးဝေး မောငျးနှငျရနျ အခကျအခဲ ရှိနသေညျ။ အားသှငျးရနျ နရောတဈဝိုကျသာ သှားလာကွရသညျ့ ကနျ့သတျခကျြ ရှိနသေဖွငျ့ ဆီဆိုငျတိုငျးမှာ အားသှငျးဖို့ စီစဉျထားရနျ ပွဌာနျးရခွငျး ဖွဈသညျ။
ဂျာမနီတွင် ဓာတ်ဆီဆိုင်အားလုံးကို လျှပ်စစ်ကား အားသွင်းရန် စီစဉ်ထားရမည်
ယူအက်စ်အေဘီလီယံ ၁၃၀ (ဒေါ်လာ ၁၄၆ ဘီလီယံ) စီးပွားရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနှင့် မော်တော်ယာဉ်များအတွက် ဝယ်လိုအားကို ဖြည့်ဆည်းရာတွင် ကားများ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသွင်းရန်အတွက် စီစဈ်ထားရန် ဓာတ်ဆီဆိုင်အားလုံးမှာတာဝန်ရှိသည်ဟု ဂျာမနီအာဏာပိုင်တို့က ပြောကြားခဲ့သည်။
လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်ဝယ်လိုအား သိသိသာသာမြှင့်တင်ရန် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ရာ
လေထုညစ်ညမ်းမှု ပိုများသော အင်ဂျင် အကြီးစားများ တပ်ဆင်ထားသည့် SUV မော်တော်ယာဉ် ပိုင်ဆိုင်သူများကို အခွန် တိုးမြှင့် စည်းကြပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး လျှပ်စစ်ကားအသစ် ဝယ်ယူသူတို့ကို အစိုးရမှ ထောက်ပံ့ငွေ ယူရို ၆၀၀၀ ချီးမြှင့်သွားမည် ဖြစ်သည်။
ဂျာမနီတွင် ပြီးခဲ့သည့် နှစ်က အိမ်စီးကားအသစ် ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းတွင် လျှပ်စစ်ကားသည် ၁ .၈ % သာ ရှိသည်။ ဒီဇယ်ကား ၃၂ % ရှိပြီး ဓာတ်ဆီကား ၅၉ . ၂ % ရှိသည်။
ပြီးခဲ့သည့် မေလတွင် ယာဉ်အသစ် စီးရေ ၅၅ ၇၈ ရှိရာတွင် လျှပ်စစ်ကားမှာ ၃ .၃ % သာ ပါဝင်ခဲ့သည်။
လျှပ်စစ်ကား ဝယ်မစီးကြသည့် အဓိက အကြောင်းတစ်ချက်မှာ ဘက်ထရီ အားသွင်းရန် နေရာများ နည်းပါးနေသဖြင့် ခရီးတာဝေးဝေး မောင်းနှင်ရန် အခက်အခဲ ရှိနေသည်။ အားသွင်းရန် နေရာတစ်ဝိုက်သာ သွားလာကြရသည့် ကန့်သတ်ချက် ရှိနေသဖြင့် ဆီဆိုင်တိုင်းမှာ အားသွင်းဖို့ စီစဉ်ထားရန် ပြဌာန်းရခြင်း ဖြစ်သည်။